“Lalao afrikanina ho an’ny tanora” (JAJ 2018): nionona tamin’ny medaly volafotsy ny Makis de Madagascar | NewsMada
“Lalao afrikanina ho an’ny tanora” (JAJ 2018): nionona tamin’ny medaly volafotsy ny Makis de Madagascar
Mitohy hatrany ny “Lalao afrikanina” ho an’ny tanora (JAJ 2018). Nihintsana avokoa ny ekipa ho an’ny taranja iraisana. Tsy tafavoaka ny basikety lalaovina olon-telo, lehilahy raha nionona tamin’ny medaly volafotsy ny Makis vehivavy.
Namotsotra ny tapakila hiatrehana ny “Lalao olympika ho an’ny tanora”, hatao any Arzantina ny volana aogositra ho avy izao, ny Makis de Madagascar, eo amin’ny rugby à 7, sokajy vehivavy. Resin’i Tonizia, teo amin’ny famaranana, mantsy izy ireo nandritra ny lalao afrikanina ho an’ny tanora (JAJ 2018), tanterahina any Alzeria. Tsy nisy afa-tsy ireo ekipa roa ireo ihany ny niady ho lohany. Raha tsiahivina, nandresy ny Tonizianina, tamin’ny isa, 12 no ho 5, isika teo amin’ny lalao voalohany. Lavon’i Tonizia indray anefa teo amin’ny fihaonana faharoa ka niondrika tamin’ny isa 28 no ho 5. Nisaraka ady sahala, 5 no ho 5 indray teo amin’ny lalao fahatelo. Nitovy ny isan’ny fandresena teo ka tsy maintsy natao ny lalao fahefatra nahalalana izay ho mpandresy. Tsy tafavoaka ny Makis satria niondrika tamin’ny isa, 24 no ho 5, izay nionona tamin’ny medaly volafotsy.
Tsy nahomby ihany koa ny taranja basikety lalaovina olon-telo miaraka Fiba 33, sokajy lehilahy. Resy intelo, nanoloana an’i Mali, tamin’ny isa mavesatra 21 no ho 3, isika ary mbola niondrika teo anatrehan’i Egypta, tamin’ny isa 20 no ho 15. Nandresy an’i Alzeria, tamin’ny isa 18 no ho 14, indray teo amin’ny andro faharoa, saingy tsy tafavoaka nanoloana an’i Nizeria, izay nandavo ny Malagasy, tamin’ny isa 20 no ho 13.
Hatreto, medaly efatra ny mbola azon’ny Malagasy, amin’ity “Lalao afrikanina ho an’ny tanora” ity: ny alimo telo, norombahin’ny fibatana fonjamby sy ny volafotsy azon’ny Makis vehivavy.